စက်ရုံကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူမှဒီဇယ်ဆန် huller စက်ကိုအန်ဂိုလာသို့ပို့ပါ
ပြီးခဲ့သည့်လတွင် ,ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇယ်ဆန် huller စက်ကိုလွမ်ဒါဆိပ်ကမ်းကိုပို့လိုက်ပြီ ,Angola ။ ဖောက်သည်ကသူတို့ဆီမှာဒီဇယ်စွမ်းအင်ဆန် huller စက်ကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်ခိုင်းတယ် ,ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံမှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားမတည်ငြိမ်ဘူး ,ဒါကြောင့် SB10 ဆန် huller စက်အတွက်ဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့်ဝယ်သူအတွက် SB50 ဆန် huller စက်နှင့်လိုက်ဖက်သည် .
အခု ,ဒီစာရွက်မရှိဘဲအင်ဂိုလာတွင်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်ရန်အတွက်ဆန်စပါးထုတ်လုပ်သည့်စက်အတွက်အရေးကြီးသောစက်များအတွက် CNCA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်နေပါတယ်။ ,ဖောက်သည်ဒေါ်လာထောင်ချီပြစ်ဒဏ်ရင်ဆိုင်ရပေမည် .
ဖောက်သည်များအဆိုအရဗစ်တာဆန်စက်မှစီးရီးဆန် huller စက်ကိုထောက်ပံ့ ,ဖောက်သည်များအနေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်းသွင်းကုန်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်နိုင်ရန်အထောက်အကူပြုသည့်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပါ.
အင်ဂိုလာသို့ဒီဇယ်ဆန် huller စက်ပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ